Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Subaru ကို Android 5.1 ကား DVD, Subaru ကို Android 4.4 ကား DVD ၏တရုတ်စက်ရုံ
ဖေါ်ပြချက်:Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Subaru ကို Android 5.1 ကား DVD,Subaru ကို Android 4.4 ကား DVD,Subaru က Android Touch ကိုမျက်နှာပြင်မော်တော်ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Subaru ကို Android 5.1 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Subaru ကို Android 4.4 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Forester 2015 အတွက် Android ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်တော Impreza 2008-2011 များအတွက် GPS နှင့်အတူကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမွေအနှစ် outback 2009-20122din မာလ်တီမီဒီယာ system ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်တော Impreza 2008-2011 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်တော / XV 2013 octa-core ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
WRX / XV 2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Impreza XV ဘို့ကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်တော 2013-2015 များအတွက်အညွှန်းနှင့်အတူကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
WRX သစ်တော 2016-2017 ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယိုခေါင်းကိုယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Impreza XV ဘို့မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016 သစ်တောများအတွက် octa Core 4GB RAM ကို Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru WRX 2016-2017 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru သစ်တော 2013-2015 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 သည်အန်းဒရွိုက်ကား GPS စနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru သစ်တော / Impreza 2008-2011 ဘို့မော်တော်ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru အမွေအနှစ် / outback များအတွက် OEM Android ကို7လက်မကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru သစ်တော / Impreza များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Subaru WRX9လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
9 လက်မ Deckless အန်းဒရွိုက် Autoradio Subaru WRX 2016  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
WRX 2016 Deckless CAR DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Forester 2015 အတွက် Android ကစားသမား
Subaru Forester 2015-2018 အတွက် Android9PX5 octa core head unit ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9PIE စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ SIX Core 32GB / 64G ROM, Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz) ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP...
သစ်တော Impreza 2008-2011 များအတွက် GPS နှင့်အတူကားတစ်စီး DVD
သစ်တော Impreza 2008-2011 များအတွက် GPS နှင့်အတူကားတစ်စီး DVD ဤတွင်, အန်းဒရွိုက် 9.0 နှင့်အတူ, RAM ကိုသစ်တောများအတွက် GPS နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 9.0 ကားတစ်စီး DVD အကြံပြု: 4GB ROM ကို: 32GB, CPU ကို: Octa-Core Processor,...
အမွေအနှစ် outback 2009-20122din မာလ်တီမီဒီယာ system ကို
အမွေအနှစ် outback 2009-2012 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX52din မာလ်တီမီဒီယာ system ကို Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo စနစ်, 4GB RAM ကို, Octa Core & 32GB ROM ကို၏ High-end Rockchip...
သစ်တော Impreza 2008-2011 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို DVD player
သစ်တော Impreza 2008-2011 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 ကားတစ်စီးရေဒီယို DVD player Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo စနစ်, 4GB RAM ကို, Octa Core & 32GB ROM ကို၏ High-end Rockchip Processor...
သစ်တော / XV 2013 octa-core ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေး
Subaru သစ်တော / XV 2013 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD အဘို့ကို Android 9.0 ကားတစ်စီး DVD 1. Subaru သစ်တော / XV, 2013 မှာ Android ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD...
WRX / XV 2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ
Subaru WRX / XV 2015 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD အဘို့ကို Android 9.0 ကားတစ်စီး DVD အများဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများရနိုင်သင်ဟာအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော free.You များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze...
Impreza XV ဘို့ကားတစ်စီး DVD
Subaru Impreza XV များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 1) 64GB အထိကို USB Port ကို / Micro SD ပေါက် () ထဲမှာ Built Subaru Impreza XV ပံ့ပိုးမှု GPS စနစ် Navigation (မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် app ကိုထည့်သွင်းမ), အဘို့ကို Android 9.0 ကားတစ်စီး...
သစ်တော 2013-2015 များအတွက်အညွှန်းနှင့်အတူကားတစ်စီးအသံဖိုင်
သစ်တော 2013-2015 များအတွက်အညွှန်းနဲ့အတူ PX5 ကားတစ်စီးအသံဖိုင် navigation အွန်လိုင်း, အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံသုံးပြီးသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ Google Maps ကို, Waze အားစသည်တို့ကဲ့သို့အလုံးကိုအညွှန်း...
WRX သစ်တော 2016-2017 ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယိုခေါင်းကိုယူနစ်
WRX သစ်တော 2016-2017 များအတွက် PX5 ကားတစ်စီးစတီရီယိုခေါင်းကိုယူနစ် အဆိုပါ Klyde DAB + ရေဒီယို receiver နှင့်အတူ, သငျသညျသာလွန် CD-တူသောအသံအရည်အသွေးနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးဒီဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုလိုင်းများကိုပိုမိုခံစားနိုင်။ (မှတ်ချက်: Klyde DAB...
Impreza XV များအတွက် PX5 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ navigation အွန်လိုင်း, အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံသုံးပြီးသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ Google Maps ကို, Waze အားစသည်တို့ကဲ့သို့အလုံးကိုအညွှန်း apps...
2016 သစ်တောများအတွက် octa Core 4GB RAM ကို Navigation
2016 သစ်တောများအတွက် octa Core 4GB RAM ကို Navigation 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး...
Subaru WRX 2016-2017 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို
Subaru WRX 2016-2017 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Subaru WRX 2016-2017 သည် 1.Android ကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Subaru သစ်တော 2013-2015 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Subaru သစ်တော 2013-2015 သည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Subaru သစ်တော 2013-2015 သည် 1.Car မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Subaru အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 သည်အန်းဒရွိုက်ကား GPS စနစ်
Subaru အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 သည်အန်းဒရွိုက်ကား GPS စနစ် android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Subaru အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 သည် 1.Android ကား GPS စနစ်, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Subaru သစ်တော / Impreza 2008-2011 ဘို့မော်တော်ကားအသံ
Subaru သစ်တော / Impreza 2008-2011 ဘို့မော်တော်ကားအသံ android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Subaru သစ်တော / Impreza 2008-2011 များအတွက် 1.Car အသံ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Subaru အမွေအနှစ် / outback များအတွက် OEM Android ကို7လက်မကားကို DVD Player ကို
ထုပ်ပိုး: 26.5 * 26 * 18.5CM / ဆုကြေးဇူးကိုသေတ္တာ
Subaru အမွေအနှစ် / outback များအတွက် OEM Android ကို7လက်မကားကို DVD Player ကို 1. Subaru အမွေအနှစ် / outback Rockchip PX3 Cortex A9,4core ကိုများအတွက် OEM Android ကို7လက်မကားကို DVD Player ကိုများအတွက် android ကားတစ်စီး DVD ကို၏ T ကသူ CPU,...
Subaru သစ်တော / Impreza များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS
Subaru သစ်တော / Impreza များအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS 1. T ကသူ Subaru သစ်တော / Impreza Rockchip PX3 Cortex A9,4core ကိုများအတွက် Android မှာ 7.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS များအတွက် android ကားတစ်စီး DVD ကို၏ CPU,...
Subaru WRX9လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ်
Subaru WRX9လက်မကားအသံအီလက်ထရောနစ် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD player ကို9နှစ်တာအတွေ့အကြုံတွေကိုနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား,...
9 လက်မ Deckless အန်းဒရွိုက် Autoradio Subaru WRX 2016
Deckless အန်းဒရွိုက် Autoradio Subaru WRX 2014-2016 အန်းဒရွိုက် Autoradio Subaru WRX 1024x600 HD ကို screen ကိုသုံးတတ်၏ ဘလူးတုသ် BC6.4.0; အားလုံးသည် Modes ထဲကနေပံ့ပိုးမှုဗီဒီယိုကို output ကို; ကြေးမုံ link ကို / လွယ်ကူ Connection ကို function ကို;...
Supply နိုင်ခြင်း: 350000 pcs per year
WRX 2016 Deckless CAR DVD player 1. WRX 2016 Deckless CAR DVD Player များအတွက်ဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ WRX 2016 Deckless...
အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 DVD player
အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 DVD player 1. အမွေအနှစ် / outback ဒီမော်ဒယ် 2009-2012 DVD player ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI ကိုအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီအမွေအနှစ် /...
တရုတ်နိုင်ငံ Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
Subaru ဘို့ကားတစ်စီး 4G ကစားသမားဟာ android 6.0 နှင့်အတူပါဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်, ဒါရုံ pad ပါလိုပဲလူတွေမောင်းသူမှတစ်ပါးကားအတွက်အခြားလူနှစ်ဦးစလုံးဟာအချိန်လွန်သွားဖို့က througt နိုင်ပါတယ်, များစွာသောဂိမ်းကစားသမားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Subaru ဘို့ကားတစ်စီး GPS စနစ်ကစားသမား texi ယာဉ်မောင်းများနှင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပေါ်မောင်းသူကလူများအတွက်အသုံးဝင်သော function ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှင့်မြင်ကွင်းများနှင့်လမ်းမပေါ်တွင်မတော်တဆမှုမှတ်တမ်းတင်နိုငျသညျ, ကခရီးစဉ်စံချိန်နှင့်အတူမှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသည်လည်း အမှန်တကယ်သက်သေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖျက်သိမ်း Audio အသံလွှင့်တီးဝိုင်းလျှင်လူဦးရှေးခယျြစေအများကြီးရှိပါတယ်, Subaru ဘို့ကားတစ်စီးကိုဗီဒီယိုအဘို့ဖြစ်၏။
မော်ဒယ်: Subaru WRX 2014-2016, Subaru သစ်တော 2014-2016 / 2008-2011, သူတို့ကို မှလွဲ. Subaru အမွေအနှစ် / outback 2009-2012 ဘို့ကားတစ်စီးဗီဒီယို, အဘို့ကားကိုဂျီပီအက်စ်ကစားသမားများအတွက်ကား 4G ကစားသမား, ငါတို့သည်လည်း oe-မထိုက်မတန်ကားတစ်စီး DVD player ကိုပေး။
Subaru အန်းဒရွိုက်ကား DVD Subaru ကို Android 5.1 ကား DVD Subaru ကို Android 4.4 ကား DVD Subaru က Android Touch ကိုမျက်နှာပြင်မော်တော်ကား DVD kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD